Fanadinam-panjakana :: Voatazona ny daty hanatanterahana ny CEPE sy ny BEPC • AoRaha
Fanadinam-panjakana Voatazona ny daty hanatanterahana ny CEPE sy ny BEPC
Tsy tokony ho hisy intsony ny fitaintainana mikasika ny fanadinam-panjakana eto Madagasikara, raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Fampianarana teknika sy araka asa (MENETP). Voatazona sy efa voafaritra avokoa ny daty hanatanterahana ireto fanadinam-panjakana ireto.
Amin’ny talata 27 aogositra no hanatontosana ny fanadinana CEPE raha ny 9 hatra­min’ny 12 septambra kosa ho an’ny BEPC. «Ireo no daty efa raikitra hanaovana ireo fana­dinam-panjakana ireo ka tsy misy intsony ny fisalasalana na mihemotra sa mandroso», hoy Rakotomalala Olivier, tale jeneralin’ny fanabeazana fototra eo anivon’ny MENETP.
Ankoatra ireo fanadinana roa ireo dia misy ilay CAE/EP, izay hatao ny 29 sy ny 30 oktobra 2019. Hatao amin’ny 26 sy 27 novambra 2019 kosa ny CAP/EP.Fantatra fa mihena mano­didina ny 5% kosa ny mpia­dina ho an’ny CEPE sy ny BEPC raha oharina tamin’ny taon-dasa. Ny fiakaran’ny taham-pahafahana ho an’ireo fanadinana ireo no voa­laza fa antony nampidina izany tahan’ny mpiadina izany. «Raha ny antontan’isa tonga eto amin’ny minisitera dia 524 997 ny isan’ny mpia­dina amin’ny fanadinam-panjakana CEPE amin’ity taona 2019 ity. Mahatratra 328 200 ny isan’ny mpiadina mane­rana ny Nosy ho an’ny BEPC raha 347 946 tamin’ny taon-dasa. Tsara dia tsara ny vokatra tamin’ny taona 2018, nisy nahatratra 90% na 98% ka nihena ireo namerin-taona», raha ny nambaran-dRaoniherijaona Andriamiakatsilavo, talen’ny fanabeazana fototra ao amin’ny MENETP.
Ny eto amin’ny faritanin’ Antananarivo no ahitana mpiadina be indrindra raha amin’ny faritanin’i Toliara no kely indrindra. Fantatra fa 8 taona no zandriny indrin­dra amin’ny mpiadina BEPC raha 66 taona kosa no zokiny indrindra.
Tranga amin’ny fampianarana :: Sekoly tsy miankina telo nahitana herisetra tamin’ny mpianatra
Tsena kaontenera Ankorondrano :: Nomena fe-potoana hiasa valo volana ireo mpivarotra hani-masaka